Govt's Stimulus Package Benefit 1,000 Enterprises in3Months | Myanmar Business Today
HomeBusinessGovt's Stimulus Package Benefit 1,000 Enterprises in3Months
BusinessFeaturedInvestment & FinanceLocalMMBIZ News
Govt’s Stimulus Package Benefit 1,000 Enterprises in3Months
The government of Myanmar has launched its economic stimulus packages to help survive the local enterprises in the face of harsh economic uncertainties caused by the COVID-19 pandemic.
On April 27, it announced an economic relief plan: ‘Overcoming as One: Covid-19 Economic Relief Plan’
However, it has granted credit toatotal of 1,016 local enterprises between April9and June2using Covid-19 Funds, according to the Working Committee to Address the Possible Economic Impacts of COVID-19.
The Myanmar Economic Bank,astate-owned bank, granted loans to local enterprises batch by batch.
It providedatotal of K5.6968 billion to 85 enterprises in the first batch, K4.495 billion to 113 enterprises in the second batch, K3.5366 billion in the third batch, K15.079 billion to 417 enterprises in the fourth batch, and K8.7335 billion to 290 enterprises in the fifth batch.
The government allocated K100 billion-K50 billion from the state budget and 50 billion from social welfare funds- to provide loans to CMP businesses, hotels and tour companies, and SMEs at the annual interest rate of 1 percent. The loan-term is one year and companies can apply for the loan online.
However, the companies that are facingalawsuit fromabank are not eligible for the loans.
The Working Committee to Address the Possible Economic Impacts of COVID-19, chaired by U Thaung Tun, Union Minister of the Ministry of Investment and Foreign Economic Relations, was formed on March 13.
Covid-19 Fundမှ ဧပြီ(၉)ရက်မှ ဇွန်လ(၂)ရက်အထိ သုံးလတာအတွင်း လုပ်ငန်းပေါင်း (၁၀၁၆)ခုအတွက် ချေးငွေကျပ်(၃၇ဒသမ၅၅၀၉)ဘီလီယံထုတ်ချေးထားကြောင်း Covid-19ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောစီးပွားရေးသက်ေရာက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးကော်မတီက သတင်းထုတ်ပြန် ထားသည်။
အထက်ပါပမာဏသည် သုံးလတာအတွင်း ဘဏ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ စိစစ်၍ ငါးကြိမ်မြောက်ထုတ်ချေးခဲ့ခြင်းြဖစ်သည်။
ချေးငွေများကို ပထမအသုတ်၌ လုပ်ငန်း(၈၅)ခု ကျပ်(၅ဒသမ၆၉၆၈)ဘီလီယံ၊ ဒုတိယ အသုတ်၌ လုပ်ငန်း(၁၁၃)ခု ကျပ်(၄ဒသမ၄၉၅)ဘီလီယံ၊ တတိယအသုတ်၌ လုပ်ငန်း(၁၁၁)ခု ကျပ်(၃ဒသမ၅၃၆၆)ဘီလီယံ၊ စတုတ္ထအသုတ်၌ လုပ်ငန်း(၄၁၇)ခု ကျပ်(၁၅ဒသမဝ၇၉)ဘီလီယံနှင့် ပဥ္စမအသုတ်၌ လုပ်ငန်း(၂၉၀)ခု ကျပ်(၈ဒသမရ၃၃၅)ဘီလီယံ ထုတ်ချေးခဲ့သည်ဟု ထုတ်ပြန်ချက် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ချေးငွေထုတ်ချေးနိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံတော်လှည့်ပတ်ရံပုံငွေ ကျပ်(၅၀)ဘီလီယံနှင့် လူမှုဖုံလုံရေးရံပုံငွေ ကျပ်(၅၀)ဘီလီယံ စုစုပေါင်း ကျပ်(၁၀၀)ဘီလီယံအား ကနဦးသတ်မှတ်၍ CMPလုပ်ငန်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အသေးစား၊ အလတ်စားလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးကုစားရမည့် ကဏ္ဍအဖြစ် ထုတ်ချေးလျက်ရှိသည်။
ချေးငွေအတိုးနှုန်းကို(၁)ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားကာ ချေးငွေသက်တမ်းမှာ တစ်နှစ် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါချေးငွေများကို အွန်လိုင်းမှတဆင့်လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ချေးငွေများကို ထုတ်ပေးရာတွင် ဘဏ်တစ်ခုခု၌ တရားစွဲဆိုခံထားရသောလုပ်ငန်းြဖစ်ပါက ချေးငွေထုတ်ချေးမှာမဟုတ်ဘဲ ကျန်ရှိချေးငွေလျှောက်လွှာများကို ဆက်လက်ထုတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
Covid-19ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သောစီးပွားရေးသက်ေရာက်မှုများအပေါ် ကုစားရေး ကော်မတီကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက ဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ယူ၍ မတ်(၁၃)ရက်၌ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
Previous articleAGD Launches an App inaBid for Digital Transformation
Next articleOnline Real Estate Expo Sells over 120 Units